Ny zava-drehetra momba ny Pramlintide
1. Jereo indray ny Pramlintide
2. Iza no pramlintide mety?
3. Ahoana ny fiasan'ny pramlintide anao?
4. Inona no tokony ataoko alohan'ny hanapahana ny pramlintide?
5. Iza no tsy tokony hampiasa ny Pramlintide?
6. Ny vokatra mahazatra hita avy amin'ny pramlintide
Ny Pramlintide (Symlin) dia hormonina artificielle izay mitranga ao amin'ny vatan'olombelona. Ny fitsaboana dia afaka mampidina ny haavon'ny siramamy ao amin'ny vatana ary noho izany dia ampiasaina amin'ny ankamaroan'ny marary 1 & 2 diabetes miaraka amin'ny insuline. Amin'ny ankapobeny, ny hormone Symlin toy ny insuline dia novokarina tao anaty pancreas raha avo lenta ny siramamy. Ireo zava-mahadomelina ireo dia miasa amin'ny fomba samihafa mba hifehy ny glucose amin'ny rà. Raha vao mandray ny dosage ianao, dia mampihena ny tahan'ny sakafo ateraky ny sakafo avy amin'ny tsinay ny fitsaboana, anisan'izany ny glucose - Pramlintide diabeta ny fivarotana eo ambanin'ny marika Symlin ary tsy misy izy io ho fanafody.
Etsy ankilany, ny Pramlintide (196078-30-5) dia manindry ny aty aminao amin'ny famokarana glucose bebe kokoa, ka manakana ny hetsika glucagon - hormone izay novokarin'ny pancreas anao ary tompon'andraikitra amin'ny fanentanana ny atiny mba hamokarana glucose bebe kokoa. Ny fampidirana ny zava-mahadomelina koa dia hampihena ny fialan-tsasatra amin'ny sakafo izay mahatonga azy ho tsara ho an'ny olona te hanapaka ny lanjany be loatra. Ao amin'ny fanadihadiana maro nataon'ireo mpahay siansa samihafa, ny Pramlintide dia hita fa mahomby amin'ny fanampiana ireo marary hampidina ny siramamy amin'ny rà ary manampy ny hafa hifehy ny lanjany.
Rehefa mampiasa ny zava-mahadomelina dia tsy mila manahy ianao satria efa nankatoavin'ny FDA tamin'ny March 2005. Na izany aza, alohan'ny hampiasana ny Pramlintide dia azonao antoka fa mandalo fitsaboana ianao mba hamaritana raha mety ny fitsaboana anao. Ny vatan'ny olona dia mety ho sarotra indrindra indrindra amin'ny fihetsika ataon'izy ireo amin'ny karazana zava-mahadomelina. Aza mividy ny Pramlintide eo amin'ny jiro ary manomboa mampiasa izany raha tsy misy ny fahalalana momba ny dokotera. Ny maha-zava-mahadomelina anao dia midika izany fa mila dokotera ianao mba hitantana ny dosage na hampiofana anao ny fomba hanolorana ny tenanao.
Ankoatra izany, rehefa mividy ny zava-mahadomelina dia ahazoana antoka fa azonao avy amin'ny traikefa sy traikefa Pramlintide mpamatsy. Ny fampiasana zava-mahadomelina sandoka dia mety hampidi-doza kokoa, ary izany dia mety hitondra fiantraikany mahery vaika. Miresaha amin'ny mpitsabo anao mba hanampy anao hahazo lam-bola tsara tarehy ho an'ny vokatra tsara kokoa. Raha hitanao fa misy fiantraikany mahery vaika dia ampahafantarinao avy hatrany ny dokotera alohan'ny hiharatsy ny toe-javatra.
2. Iza moa ny Pramlintide mety?
Araka ny voalaza etsy ambony, dia ny marary diabeta dia matetika no ampiasaina io zava-mahadomelina io mba hanampiana azy ireo hifehy ny siramamy ao amin'ny vatany. Ny Pramlintide dia nahomby tamin'ny fitondrana diabeta ho an'ireo marary izay tsy ampy ny insuline. Azo ampiasaina miaraka amin'ny insuline ny zava-mahadomelina mba hahazoana vokatra tsara kokoa. Na izany aza, dia ataovy izay hahazoana ny fanafody fitsaboana amin'ny dokotera mba tsy hisian'ny vokatra mahatsiravina.
Ny fianarana dia nanambara koa fa ny Diabeta Pramlintide dia afaka manampy ny olona izay te-hifehy ny lanjany. Ny fihinanana fanafody dia mampihena ny filana, ary noho izany, ny vatana dia mandany ny fatran'ny vatana mitondra mankany amin'ny fahavoazana. Ny fampiasana an'io zava-mahadomelina io dia midika fa hifehy ny habetsahanao izany, izay fomba tsara indrindra hijerena ny lanjanao. Mampihena ny famokarana glucose amin'ny atiny koa ny Pramlintide. Na izany aza, lazaina fa ampiasaina bebe kokoa ny zava-mahadomelina, saingy afaka manamarina amin'ny dokotera na ny mpivady ianao alohan'ny hanombohanao mampiasa izany.
Aorian'ny fitsapana ara-pitsaboana, ny dokotera dia afaka manolotra ny zava-mahadomelina ho anao noho ny antony ara-pahasalamana rehetra mety ho voavaha ao amin'ny Pramlintide. Indraindray dia azo ampiasaina amin'ny hafa toy ny insuline ny zava-mahadomelina mba hanatsara ny fahombiazany ary hanampy ny mpampiasa hahatratra vokatra faran'izay betsaka. Ataovy azo antoka ny fandraisanao ny dokotera amin'ny faran'ny dosage Pramlintide, mba tsy ho voan'ny aretina hafa. Indraindray ianao dia afaka manomboka olana avy hatrany, mandray ny dosage voalohany na koa aorian'ny fotoana, ary mila fitsaboana ianao rehefa manomboka manana olana.
Ity fanafody ity dia endriky ny hormona amylina izay entin'ny pancreas toy ny insuline ao amin'ny vatanao. Symlin dia ampiasaina amin'ny famokarana ity zava-mahadomelina ity ho loharanom-bolan'ny Pramlintide. Izany dia amylin-n'ny olombelona noforonina, ary amin'ny fampidirana, ny Pramlintide dia miasa amin'ny fomba telo hanampy amin'ny fahaverezan'ny lanja sy ny fihenanam-pandrianao. Ho an'ny toe-javatra, dia miasa amin'ny alàlan'ny asa an-tsitrapo izy. Izany no mahatonga anao hahatsapa feno. Ny sakafo dia mifandray amin'ny atidoha. Mihinan-kanina ianao satria milaza ny tenanao fa noana. Amin'ity zava-mahadomelina ity, ny atidohanao dia hilaza aminao fa feno nandritra ny fotoana fisakafoanana ianao izay mahatonga anao tsy hihinana na hisakafo. Ny vokatra tsara dia vokatry ny fihinanana na fihinanana raha tsy ilaina. Ny faniriana no antony lehibe mahatonga ny fanolanana izay ahafahanao miteraka zavatra (zavatra mamy indrindra) na dia tsy noana aza ianao. Symlin dia afaka manampy anao hanaisotra ity olana ity.
Ny fomba iray hafa ahafahan'i Symlin miasa ao aminao dia amin'ny asa ataon'ny vavony. Izany dia amin'ny fampiasana ny zava-mahadomelina, ny fihenan'ny sakafo miala avy eo amin'ny vavony mankany amin'ny tsina kely dia mihena. Ny fitsaboana amin'ny alikaola sy ny sakafo dia mandray anjara amin'ny tsina kely, ary aorian'ny dingana izay manomboka mahatsiaro noana ary vonona ny hihinana indray. Inona no mitranga rehefa miha-maharitra ny sakafo hahatongavana any amin'ny digestion? Haka fotoana lava ho anao hahatsapa ny hanoanana ka hampitombo ny fifaranan'ny fotoam-pisakafoanana.
Ny fomba fahatelo dia amin'ny alalan'ny asa vita amin'ny aty. Amin'ny asa atao amin'ny atiny, dia miasa i Symlin amin'ny fanakanana na fampihenana ny famotsorana ny glucagon amin'ny pancreas. Ity no hormonina tompon'andraikitra amin'ny famotsorana siramamy ao amin'ny rà. Ny glucagon dia manampy ny aty amin'ny fiovan'ny glycogen amin'ny glucose. Ao amin'ny trangam-pangidiana diabetika izay misy fifohana siramamy be dia be, i Symlin dia manampy amin'ny fifehezana ny olana amin'ny fisorohana ny fiovan'ny glucose bebe kokoa amin'ny alàlan'ny glucagon mena.
Ampiasao araka ny tokony ho izy ny Symlin satria tokony omen'ny dokotera anao izany. Araho ny toro-lalana rehetra ao amin'ny lisitry ny ordinateranao. Matetika ny dokotera no manitsy ny dosinao mba hahazoana antoka fa hahazo vokatra tsara indrindra ianao. Rehefa manomboka ny dosie Symlin ianao, dia afaka miova ny dosage hormoneo. Aza mampiasa fanafody farafahakeliny na farafaharatsiny na mandritra ny fotoana lava kokoa noho izay omen'ny mpitsabo anao. Tsarovy, ny Hypodermic injection tokony hataon'ny matihanina mba hisorohana ny olana rehetra, fa ny dokoteranao dia afaka mampiofana anao amin'ny fomba hifehezana ny tenanao any an-trano.
Ny Symlin dia aspirinina eo ambany hoditra, amin'ny vanim-potoana mitovy amin'ny hormone fitsapana anao; na dia eo aza ny doka iray misaraka. Aza mifangaro amin'ny zava-mahadomelina miaraka amin'ny insuline. Aza mitsiriritra ny fanafody, raha tsy azonao antoka izany satria mety hiteraka olana izany. Alao ny dosage avy amin'ny dokotera na aorian'ny fampiofanana anao ny fomba fampiasana ireo taratra tsara.
(1) Inona no tokony hatao alohan'ny hampiasana ny Symlin
Avelao ny fantatry ny mpanamboatra anao raha misy fanafody na fanafody entina ao Symlin. Jereo ny fitarihana fanafody ho an'ny fitaovana alohan'ny hanombohanao ny dosage.
Ampahafantaro ny dokotera amin'ny dokotera sy fanafody tsy voatanisa rehetra azonao amin'io fotoana io. Mety ho vitaminina, fanafody mampinono na sakafo fanampiny izy ireny. Jereo ny fampitandremana momba ireo fanafody ireo mba hahitana raha avela hampiasa azy ireo miaraka amin'ny fanafody hafa toy ny Symlin ianao. Ny dokoteranao dia afaka mampiasa ny fanamarihana mba hamaritana ny dosage tokony ho an'ny Pramlintide ho anao na sao / afaka hanara-maso anao akaiky amin'ny vokany hafa.
Raha misy mpanohitra ianao, fanafody fanaintainana sy famonoana fanaintainana, miala am-bava, tokony halaina farafahakeliny ora roa alohan'ny hampiasana an'i Symlin.
Ampahafantaro ny dokotera raha bevohoka ianao na rehefa bevohoka rehefa mampiasa ny zava-mahadomelina mba hisorohana ny fahasarotana amin'ny ho avy.
Vakio sy mahatakatra ny torolalana sy ny fitarihana ny fampiasana. Tsy maintsy mamaky sy mahatakatra ary manaraka ny torolàlana fanafody ianao. Ataovy ny fikarohana ary azonao atao ny mampiasa ny zava-mahadomelina, inona no andrasana aorian'ny fampiasana sy ny mety ho fiantraikan'ny Symlin. Alao ny fitaovana ilaina rehetra mandritra ny fanafody toy ny fanjaitra. Mitadiava fanampiana amin'ny mpahay siansa hahatakatra ny karazana fanjaitra sy izay tsara indrindra ho anao. Vakio ny torolàlana sy ny torolàlana momba ny famolavolana ny fampiasana ny pen amin'ny fitsaboana ny zava-mahadomelina. Ataovy azo antoka tsara koa raha mila manamboatra fanjaitra vaovao ianao ary avelao ny dokotera hampiseho anao ny fomba fampiasana izany.
Alohan'ny fitantanana ny fampidirana ny Pramlintide dia andraso foana ny vahaolana ary ataovy azo antoka fa mazava sy tsy misy loko izany. Raha be ny oram-batravatra, matevina, matevina na misy vatom-paty, dia mety ho tapitra izany na mety tsy hampiasaina. Jereo ny daty fandaniana amin'ny labozia ary raha mbola tsy tapitra hatreto izy dia mitady fanampiana amin'ny dokotera iray hahafantarana raha azo antoka ny fampiasana azy.
Arovy ny faritra fiterahana. Mety misy na aiza na aiza eo amin'ny feny na avy aiza na avy aiza no omen'ny mpitsabo anao. Amboary ny faritra amin'ny alalan'ny fanadiovana sy fanosehana aloha. Ny faritra tokony ho farafahakeliny, fara fahakeliny, avy amin'ny toerana hidiranao ao anaty insuline.
(2) Symlin dosage mety
Ny Symlin dia voaporofo fa nahazo tombontsoa lehibe ho an'ireo voan'ny diabeta 1. Na izany aza, dia azo tratrarina izany raha toa ka ampiasaina ara-drariny sy amin'ny isa tsara. Misy fomba vitsivitsy hanaovana symlin ho anao. Ny voalohany dia amin'ny manomboka kely. Mba hamantarana sy hamaritana ny tsara Pramlintide dosage Izay miasa ho anao dia tsy maintsy manomboka ambany ianao ary mety hampitombo ny vola midina. Manomboha amin'ny fampiasana ny zava-mahadomelina amin'ny sakafo iray isan'andro. Ohatra, afaka manomboka amin'ny fampiasana azy amin'ny sakafo maraina ianao. Rehefa hitanao ny dosage tamin'io sakafo io ary fantany fa tsy misy fiantraikany ratsy dia ampiharo tetika mitovy amin'ny sakafo hafa. Mariho fa tsy tokony hiovaova amin'ny sakafo iray hafa ny dosage. Tokony haka fanafody mitovy na inona na inona firy amin'ny sakafo ianao.
Ny dingana manaraka dia ny famaritana ny dosia tena tsara ho anao. Tokony hanomboka amin'ny kely indrindra izay 15 mcg raha mampiasa penso na 2 ho an'ny 3 venty ianao raha mampiasa sedriana. Ampiasao izany mandritra ny telo andro eo ho eo ary ampitao amin'ny 15 mcg izy mandra-pahatonganao any amin'ny dosie ara-pahasalamana.
Ny hamaroan'ny Symlin mety dia mety hahatonga ny vavanao ho mora amin'ny 15 ka hatramin'ny 30 minitra aorian'ny fitsaboana azy, na mety ho tratry ny siramamy ambany ianao mandritra ny ora vitsivitsy. Raha tsy mahatsapa ny iray amin'ireto ianao dia mila ampitomboinao ny dosage. Mety mila mampitombo ny dosage amin'ny fampiasana maharitra. Aorian'ny fampiasana fotoana lava be toy ny volana na taona, azonao atao ny mampitombo ny fandeferana amin'ny Symlin, ary mila mitaky vola be kokoa ianao mba hahatratrarana vokatra tadiavina.
Misy dosage mety araka izao manaraka izao;
Ny microgramm 15 dia manaparitaka manomboka eo alohan'ny sakafo rehetra
Ny dosim-bolana mandritra ny vanim-potoana (anisan'izany ny insuline aloha) dia tokony halaina amin'ny dimanjato dimanjato.
- Tokony hampitombo ny fitomboan'ny manaraka (30, 45, na sixty mcg) raha tsy nisy tsy fahampian-tsakafo ara-pahasalamana lehibe nandritra ny telo andro.
- Raha toa ka miteraka adihevitra lehibe eo amin'ny dingana 50 na mihoatra ny enim-polo isaky ny dôlôgrama ny diky, dia tokony ho kely dia kely ny micrograms 30.
- Raha toa ka tsy zakan'ny doka telopolo tapitrisa isaky ny dôlara, dia tokony hodinihina ny fiafarana.
Ampiasao ny fitsaboana mifandraika amin'ny marary amin'ny aretim-pisefoana iray. Ny haino aman-jery momba ny fahasalamana manerantany dia tsy nahavita nanatonta ny fitantanana aldohexose na dia nanampy aza ny fitsaboana hormonina tsara indrindra.
Adult olon-dehibe ho an'ny fahasamihafan'ny polygenika malaza 2:
Ny microgramm 60 dia manaparitaka manomboka eo alohan'ny sakafo rehetra
- Tokony hampitomboina hatramin'ny 60 ka hatramin'ny 200 mikrograma mialoha ny sakafo lehibe rehetra raha tsy misy tsy fahampian-tsakafo ara-pahasalamana farafahakeliny mandritra ny telo andro farafahakeliny.
- Raha mbola mitohy ny tsiranoka amin'ny doka 200 dôlara dia tokony ho kely ny isa hatramin'ny enimpolo microgramm.
(3) Taorian'ny nanindrana ny Pramlintide
Mitandrema mba tsy hamela ny glucose ho ambany ambany. Glucose ambany (hypoglycemia) ambany dia mety hitranga mandritra ny telo ora aorian'ny fitsaboana Symlin. Raha toa ka manana hogoglycemia mafy ianao ary tsy mahazo mihinana na misotro, dia ampiasao ny tsindrona anatiny. Ny dokotera dia hamoaka kitapom-batana an-tsokosoko ao anatiny ary hampiseho anao ny fomba fampiasana azy io.
Jereo koa ny mari-pamantarana ny glucose avo (hyperglycemia) toy ny hatsiaka lehibe, fanafoanana ny ala, hanoanana, vava maina, fofona hafanana, tsiranoka, hoditra, fahitana marevaka, ary fahavoazana.
Jereo ny glucose amin'ny fomba mahazatra mandritra ny fotoana misedra olana, fitsangantsanganana, aretina, fandidiana na fitsaboana, fitsaboana mahery vaika, na misotro toaka na misotro sakafo. Ireo singa ireo dia hisy fiantraikany amin'ny aldohexose misy anao, ary mety hahitana ny fanitsiana ny fanirianao.
Ampiasao ny fanjaitra sy ny fanisiana indray mandeha indray mandeha. Araho ny lalàm-panjakana na lalàm-panorenana mifehy ny fanesorana ny fanjaitra sy ny angatra. Ampiasao ny fitaovam-pandrenesana "manasitrana" (mangataha fanafody fanosehana any amin'ny toerana rehetra hamporisihana ny iray sy ny fomba hanesorana azy). Arovy tsy ho tratran'ny tanora sy ny biby fiompy ity fitaovana ity.
Aza misaraka amin'ny olona iray hafa miaraka amin'ny olona iray hafa. Mizara ny fampidirana Pramlintide Ny penitra dia hamela aretina toy ny aretina ateraky ny aretiota na ny VIH iray amin'ny olona iray tena mampidi-doza.
Antsoy ny dokotera raha toa ka nihetsiketsika mafy nandritra ny andro maro ianao. Mety ho marika fa ny avo dia avo loatra
Ny Symlin dia ampahany amin'ny fitsaboana iray miaraka amin'ny sakafo, fanatanjahan-tena, fitantanana lanja, fitsaboana glucose tsy tapaka, ary fitsaboana voalohany. Manaova fandaharam-potoana isan'andro, alohan'ny hanombohana ny fitsaboana sy fitsapana ny glikosa anao. Ilaina tokoa ny mandamina ny sakafo sy ny fikarakarana ara-batana. Tsy ho vonona ny hampiasa Symlin foana ianao raha tsy manaraka ny toro-lalana.
Ny Pramlintide dia hampiadana ny famoahana, ary tokony haka fotoana bebe kokoa amin'ny vatanao ianao mba hisotroana fanafody rehetra azonao am-bava. Aza avela haka fanafody am-bava mandritra ny ora maromaro alohan'ny ora na adiny roa raha mampiasa Symlin ianao.
Aza misotro toaka. Izany dia hampidina ny glucose.
Ny fahitanao ny fanandramana ho an'ny glucose ambany dia ambony kokoa raha:
Aza manaraka ny torolalan'ny mpitsabo anao mba hampihenana ny fampiasanao hormonina alohan'ny sakafo
Ampiasao bebe kokoa ny hormonina SYMLIN na hormonina mihoatra noho izay omen'ny mpikarakara anao
Manova ny hôpitanao hormonina tsy misy fahalalana momba ny dokotera
Mihinàna sakafo tsy ampy sakafo noho ny sakafo mahazatra
marary ary tsy mahazo mihinana
dia mahery kokoa noho ny mahazatra
Manana ny glucose kafe alohan'ny fampidirana
Famerenana ny fanampiana ara-pitsaboana!!!
Ny fanampiana ara-pitsaboana SYMLIN dia tokony hajanona raha misy:
Tsy mahomby amin'ny fanaraha-maso ny siramamy ao amin'ny ra.
Tsy fitovizan-kevitra amin'ny fiovaovan'ny hormone.
Ny tsy fahampian'ny fikarakarana ara-pahasalamana tsy tapaka na ny fitsidihana fitsaboana.
Raha sendra tsy fantatrao ianao, dia mety tsy ho anao ny Diabeta Pramlintide. Ny tsy fahafahana mampahafantatra raha mety hitera-doza ny glucose dia mety hampidi-doza noho ny mety ho toetry ny hypoglycemia amin'ny Pramlintide.
Raha fantatrao ny momba ny gastroparese, dia mety tsy ho kandida ho an'ny Pramlintide ihany koa ianao noho ny famindrana taova ao amin'ny birao anatiny izay mitranga aminy. Ny Pramlintide dia tsy nankatoavina ho toy ny fiarovana ho an'ny zazakely na zaza tsy ampy taona; Noho izany raha bevohoka na misotro rano ianao, dia tsy azo omena anao ny Pramlintide.
Ny Pramlintide dia hampitombo ny fahafahana hampidina ny siramamy ao amin'ny vatanao, ary avy eo dia tokony hokarakaraina ny Pramlintide.
Alohan'ny handraisanao ny Pramlintide, tokony hahatakatra ny dokotera ianao raha:
Tsy nahatsikaritra ny fisian'ny hypoglycemia
Mora bevohoka, mikarakara bevohoka na mampinono
Tsy mahazaka metacresol
Manana na manana gastroparesis
Maka antidepressantsy na fanafody
Ankoatra ny vokatra ilaina, Diabetes Pramlintide (mofomamy miasa ao amin'ny Symlin) dia mety miteraka vokatra tsy mety. Na dia tsy misy ireo vokatra ireo aza dia mety hitranga, raha mitranga izy ireo dia mila dokotera izy ireo.
Andramo miaraka amin'ny dokotera avy hatrany raha toa ka misy ny fiantraikany amin'ireto manaraka ireto rehefa mandray ny Pramlintide:
teny tsy voahevitra
Fahamendrehana ao anaty tratra
Ny vokatra sasany amin'ny vokatry ny Pramlintide dia mety mitranga matetika fa tsy mila dokotera. Ireo lafiny ireo dia mety hiala amin'ny fitsaboana raha manitsy ny zava-mahadomelina ny vatanao. Ankoatra izany, ny fahaiza-manao momba ny fahasalamanao dia vonona ny hilaza aminao ny fomba hijanonana na hamehezana ny maro amin'ireto vokatra manaraka ireto. Diniho miaraka amin'ny mpitsabo anao raha toa ka mbola mitohy na mitebiteby ny vokatra manaraka toy izany na raha misy fanontaniana momba azy ireo:
Sarotra ny mihetsika
Fahasalamana na fahantrana amin'ny tenda
Ny Pramlintide dia ampiana amylin analoga izay hampiasaina amin'ny hormone amin'ny andron'ny andro ao anatin'ny fitsaboana ny tsara fanahy ary mametraka aretina maro samihafa. Ao amin'ireo marary manana aretina maromaro maromaro, ny Pramlintide koa dia afaka mahazo ny antidiabetic monotherapy, ny glucophage monotherapy, ny fifangaroan'ny sulfonylurea sy ny glucophage, na ny mix of antidiabetic, glucophage and hormone. Ny fanampiana ara-pahasalamana amin'ny Pramlintide dia mampihena ny A1C amin'ny zero.2% amin'ny 0.6% ary noho izany ny 2 ora ora alohan'ny adipandia aldohexose amin'ny telo.4 hatramin'ny dimy mmol / L. Tao anatin'ny fandalinana taona 1, ny fanampiana ara-pitsaboana an'i Pramlintide dia nampihena ny lanjany tamin'ny fahamaotinana; Na izany aza, tao anatin'ny herinandro 52-herinandro, ny lisitra misokatra, ny lanjan'ny fitsitoketram-panamparana dia niverina tany amin'ny ambaratonga fototra. Misy fitsapana misy ny dingana ankehitriny izay mandinika ny fahombiazan'ny Ny fahaverezan'ny fahavokaram-bary mpandraharaha.
Ny Pramlintide dia manasongadina ny mombamomba ny filaminana azo antoka sy ny fikajiana ambany indrindra. Ny fihetsiketsika mihetsiketsika no zava-mitranga matetika. Mba hisakanana ny voka-dratsin'ny hypoglycemia, ny fihenam-bidy amin'ny hormone fanalavana amin'ny dimanjato amin'ny telon-jato ary ny fijanonana ny fijerena aldohexose dia azo antoka.
Rehefa nozohina, Pramlintide acetate dia toy ny fitsaboana mifanaraka amin'izany raha tsy mamaly ny hormone fotsiny ny nivoahan'ny glucose. Amin'ny alàlan'ny haingam-pandeha amin'ny tsy fahampian'ny aba, dia manampy amin'ny fitantanana ny glucose avo lenta kokoa noho ny hormone. Ny pramlintide dia manatsara ny fisisihan'ny fitsaboana amin'ny alàlan'ny vatana amin'ny ampahany ny sela noplastic izay mampiavaka ny karazam-borona na ny mutant p53. Noho izany, ny Pramlintide dia mety ho fampiroboroboana fitsaboana mety amin'ny fitsaboana amin'ny vatana.
Mitandrema amin'ny marika ambany amin'ny glucose ambany ary diniho lalandava mialoha ny misakafo. Ny ankamaroan'ny marary ao amin'ny SymlinPen dia faly ao. Mikaroha hatrany amin'ny dokotera anao alohan'ny hanombohanao ny dosage Pramlintide na rehefa te hijanona amin'ny fanafody ianao raha maka ny Pramlintide.
Ny vidin'ny Pramlintide dia mety tsy mitovy amin'ny mpivarotra iray na mpivarotra ho an'ny hafa, fa miantoka foana izany Buy Pramlintide avy amin'ny mpanamboatra azo antoka. Misy mpivarotra rongony samihafa azo atolotra amin'ny aterineto saingy mitandrina mba tsy hividy ny kalitao ambany na ny zava-mahadomelina efa tapitra. Manaova fikarohana momba ny tsenanareo mba hitadiavana ny mpivarotra Pramlintide tsara anao manodidina anao. Mifidiana mpivarotra amin'ny vidiny tsara indrindra ary koa ny iray izay mametraka ny entana ao anatin'ny fotoana fohy. Ny dokotera koa dia mety ho olona tsara indrindra hanampy anao hahazo ny zava-mahadomelina tsara indrindra sy avy amin'ny mpivarotra za-draharaha.
Younk, LM, Mikeladze, M., & Davis, SN (2011). Pramlintide sy ny fitsaboana diabeta: famerenana ny angon-drakitra hatramin'ny fampidirana azy. Hevitra momba ny pharmacotherapy, 12(9), 1439-1451.
Herrmann, K., Frias, JP, Edelman, SV, Lutz, K., Shan, K., Chen, S., ... & Kolterman, OG (2013). Ny pramlintide dia manatsara ny fepetra fitsaboana glycemic sy ny lanjan'ny vatana amin'ny marary amin'ny karazana I Diabetes Mellitus Mandritra ny fitsaboana tsy tapaka fitsaboana fanampiny. Ny fitsaboana postmastery, 125(3), 136-144.
Herrmann, K., Brunell, SC, Li, Y., Zhou, M., & Maggs, DG (2016). Ny fiantraikan'ny faharetan'ny aretina amin'ny fiantraikan'ny pramlintide amin'ny karazana 1 karazana: fanadihadiana momba ny hôpitaly telo. Fampandrosoana amin'ny fitsaboana, 33(5), 848-861.